Andron’ny ”Mate”, Fanomezana Voninahitra Ny zava-pisotro Nentim-paharazana Amerikana Tatsimo · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Gabriela García Calderón Orbe Nandika (fr) i Alexandra Borra, Caroline Charrier, imanoela fifaliana
Voadika ny 01 Jolay 2017 2:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Aymara, русский, Italiano, Español
Sarinà tavoara mahazatra androsoana ny mate. Sary tao amin'ny Flickr an'i Diego (CC BY-NC 2.0).
Ny 30 novambra no fankalazana ny Andron'ny Mate. Ity zava-pisotro mafàna tsy misy alikaola ity, na dia an'ny lova ara-kolotsainan'ny firenena Amerikana Tatsimo maro aza, dia hita manerana an'i Arzantina sy Orogoay, izay tena miparitaka lavitra tokoa ny fanjifàna azy.
Voakarakara miaraka amin'ny raviny sy ny sampany voaendy ny mate, ary avy eo totoina ho hierba mate, antsoina ihany koa hoe « diten'ny zezoita » na « diten'ny Paragoay ». « Mate » no anarana omena ilay tavoara kely fampiasa araka ny nentim-paharazana ho toy ny zinga fandomana zava-pisotro.
Mitantara ny tantaran'ny yerba mate ity sarimiaina mahatsikaiky ity :
Ankehitriny, tsy afaka eritreretina ny fanafoanana ny fanjifàna azy any Arzantina. Kanefa, izany no zava-nitranga tamin'ny taonjato faha-XVII izay niheverana ny fisotroana ny mate ho toy ny « fahazarana maharikoriko », « areti-mifindra mampidi-doza any amin'ireo mponina teratany ».
Tao anatina taratasy nosoratany ho an'ny mpanjaka lahy, [ny governoran'i Buenos Aires, Diego Marín] i Negrón dia te-hisarika ny sainy amin'ny «tranga hoe ny fisotroana ny yerba (mate) imbetsaka ao anatin'ny andro iray miaraka amin'ny rano mafana be loatra dia fironana maharikoriko mankamin'ny ratsy sy maloto». Ny fisotroana mate dia «mahatonga ny olona ho kamo, ary hitondra ny tany amin'ny fahaverezana. Koa satria efa niely be loatra ary ankehitriny efa tafaraikitra tsara io fironana mankamin'ny ratsy io, matahotra aho fa tsy afaka ny hanafoana izany isika raha tsy Andriamanitra tenany mihitsy no hanao izany », hoy ilay mpiasampanjakana izay nanantena fa ny Fitondran'Andriamanitra no hamita ny zavatra tsapany fa tsy ho vitany. Taty aoriana, Hernandarias [governoran'i Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe ] dia nanafoana ny yerba mate. «Aoka tsy hisy intsony olona, manomboka izao, handeha hitady yerba na haniraka indiana hàka ka hitondra izany avy eo. Indrindra aza manandrana ny hahazo izany raha tsy tanareo ny hangiazana izany avy any aminareo, ary amin'izany tranga izany, tsy maintsy hodorana eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe izany ».
Tsy vitan'ny nibaiko ny handoroana ilay ahitra fotsiny i Hernandarias fa nametraka ihany koa izy sazy ho an'izay rehetra « mampiditra na manana fikasana hampiditra ilay ahitra ao an-drenivohitra » : 100 pesos ho an'ireo Espaniola na 100 kapoka karavasy ho an'ireo tompontany.
Araka ny fandinihana nataon'ny Institut Nactonal de la Yerba Mate,(Ivontoerana Nasionaly Fandalinana ny Yerba Mate) mahalany hatramin'ny 100 litatra-nà mate isan-taona ireo Arzantina :
Ao amin'ny firenena, miteny ho azy ny tarehimariky ny fanjifàna ny mate : asehon'ny fandinihana nataon'ny Ivontoerana Nasionaly Fandalinana ny Yerba Mate fa misotro eo amin'ny 100 litatrana mate eo isan-taona ireo mpanjifa ilay zava-pisotro nalòna. […] Isan-taona, miakatra ho 240 000 taonina ny varotra yerba, lavitra any alohan'ny kafe izay 33 400 taonina sy ny dite izay 6 000 taonina.
Ahitana otrikaina mahasoa ny fahasalaman'ny mpanjifa azy ny mate. Voalohany, ny mateina, singa lehibe indrindra ao aminy, dia manana hatsarana manome hery izay manaitra ny rafi-pisainana foibe, manome fahalalinan-tsaina, ary manatsara ny fifantohana. Fanampin'izay, nekena ho toy ny antioxidant mahery vaika kokoa noho ny asidra ascorbic ao amin'ny Vitamina C ny yerba mate.
Ary hamaranana izany rehetra izany, mitondra Vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E ary ka hatramin'ny asidra amine miisa 15 ny mate.
Toy ny efa nandrasana, naneho hevitra tamin'ny alalan'ny Twitter ireo mpitia ny mate :
Mety tsara hizaràna fotoana manokana miaraka amin'ny namana, fianakaviana ny mate… ary namana lehibe rehefa tavela irery mamerin-desona ho an'ny fanadinana.
Ireo zavamisy 10 mety tsy fantatrao mikasika ny mate (raha tsy arzantina na orogoaiana ianao). https://t.co/kjBfYMCjQw
Raha mankany amin'ny tenifototra #DiaNacionalDelMate (#Andro Nasionalin'ny Mate) ianareo, ho afaka mamaky fa misotro eo amin'ny 100 litatranà mate isan-taona ry zareo arzantina.
LuuBiagetti: #DiaNacionalDelMate. Miaraka amintsika amin'ny trangan-javatra rehetra ny Mate, amin'ny fotoana tsara toy ny amin'ny ratsy. Hitahy ity « volamena maitso » ity, izay sarobidy tokoa amiko, anie Andriamanitra.
ArnaldoIrigoyen:#DiaNacionalDelMate . Fialantsiny iray io mba hanombohana finamanana, tantaram-pitiavana na mba ho tsara fiarahana abatin'ny fotoam-pifaliana sy alahelo.
Nandika (fr) i Alexandra Borra